Serivisy fitiliana an-tserasera - valin'ny 48 ora - 10 $ US isaky ny vato
Manolotra serivisy fitiliana vatosoa an-tserasera isika
Vidin'ny serivisy fitaterana vato an-tserasera: 10 $ US isaky ny vato / Vokatra ao anatin'ny 48 ora.
* Fandoavam-bola amin'ny vola rehetra.
Miorina amin'ny sary sy horonantsary vatosoa omena. Izahay dia hamakafaka ny toetran'ny vatanao:
Serivisy fitiliana vato an-tserasera. Ohatra ny vokatry ny mailaka:
Famerenan'ny hazavana. (Afo)
Toerana kristaly (ho an'ny vato matevina sy tsy misy fotony)
Aorian'ny fandinihana ireo fananana rehetra ireo dia ho azonao ny valim-pifidianana araka izay azo atao.
Ohatra, raha ny valiny dia "Glass“, Saingy tsy afaka milaza isika raha izany fitaratra voajanahary or vera namboarina. Homenay valiny roa ianao, miaraka amin'ny salanisa mety hahitana.
Glass. Azo inoana: 100%
Fitaratra vita amin'ny olona: 90% mety
Fitaratra voajanahary (Obsidian): mety misy 10%
Ho azonao ny valin-teninao amin'ny mailaka ao anatin'ny 48 ora aorian'ny fandoavana.
Tsy misy fampahalalana fanampiny na notadiavina.
Arakaraka ny hatsaran'ny sary sy ny horonan-tsary no ho tsara kokoa, ny ho fantatsika.
Ahoana ny fandefasana sary sy horonan-tsary?
Rehefa avy nahazo ny fandoavanao ianao dia handray mailaka fanamafisana miaraka amin'ny safidy samihafa handefasana ny rakitrao: Email, Messenger, WeChat, WhatsApp, Line, Viber, sns.
Ahoana no ahafahanao mamantatra ny sarinay?
Rehefa mandefa ireo rakitra dia mila mandefa ny laharan'ny invoice anao koa ianao, hahafahantsika mamantatra tsara ireo rakitrao.
Manana vato maromaro hizaha toetra ahy aho, inona no hataoko?
Azonao atao ny misafidy ny isan'ny vato hitsapana, azonao atao ny mandoa ny zava-drehetra miaraka amin'ny volavolan-dalàna tokana.
Efa nandefa sary sy horonan-tsary taminareo aho fa mbola tsy nahazo valiny aho?
Hadinonao angamba ny nanonona ny isa faktiora na mety mbola tsy nandoa vola ianao.
Azoko atao ve ny mahalala ny firenena niavian'ny vato?
Tsia, tsy azo atao ny mahafantatra ny fiaviany ara-jeografika tamin'ny vato tamin'ny sary na video.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy azo atao ny manandrana fitandremana vato fa tsy afaka manao fitsapana miaraka amin'ny fitaovana.
Eny tokoa, tsy afaka manandrana ny fahasamihafana, ny index index, ny komposisi-simika. Tsy azo atao koa ny manadihady fomban-kevitra ao anaty mikroskopika, sns.
Zava-dehibe daholo izany fampahalalana izany ho amin'ny fanadihadiana marina. Ny valin-teninay dia matetika no betsaka, satria ny fitiliana ara-maso dia tsy milaza afa-tsy ny fampahalalana vitsivitsy izay tsy ampy.
Tsy ny fanamarinana ofisialy ny vokatra azo. Ho ny hevitry ny mpahay gemology irery ihany no ho marina.
Na inona na inona toe-javatra, io tombanana io dia azo ampiasaina amin'ny fanamarinana.
Tsy tompon'andraikitra amin'ny famarotana na fividianana vato izahay.
Amin'ny maha mpahay siansa azy. Tsy manolotra serivisy fanadinana vidiny izahay. Ny vidiny dia miankina amin'ny tsena, izay tsy misy ifandraisany amin'ny siansa gemological.
Tsy hisy famerenam-bola homena aorian'ny nahazoana ny valiny. Eny tokoa, na dia diso fanantenana ianao amin'ny valiny. Ny gemologist dia nandany ny fotoana hiasa amin'ny vato na inona na inona fa sandoka na tena vato io.
Baiko ny serivisy fitiliana vato an-tserasera: 10 $ US isaky ny vato
Raha te hiresaka amin'ny mpampianatra gemology ianao. Manolotra serivisy consultation amin'ny Internet ihany koa isika amin'ny alàlan'ny videoconference, amin'ny alàlan'ny fanendrena, manomboka amin'ny 30 US $ isan'ora. Manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. 8 maraina ka hatramin'ny 6 hariva. Kamboja / Thailand faritra (UTC + 7)
Ampidiro ny serivisy consultation gemology amin'ny Internet: 30 $ US isan'ora